Fametahana hose, mpamatsy fitaovana fametahana vy - HNR
HAINAR Hydraulics CO., Ltd. dia nanomboka nanamboatra fitaovana hose hydraulic, adaptatera ary fivorian'ny hose hydraulic tamin'ny 2007, Ny vokatray sy ny vokatra lehibe indrindra dia ho an'ny fitaovana hydraulika avo lenta sy fivorian'ny hose.
EN856 4SP - Tosidra ambony, 4 Wire Spiral Hose
EN856 4SH - Fanerena avo be, 4 Wire Spiral Hydrualic hose
ISO 16028- Tombokase tarehy
Na orinasa mitana ny patanty ianao na orinasa mandray ny vokatra manomboka amin'ny foto-kevitra mankany amin'ny fanatanterahana, ny fahitsiana sy ny fahitsiana no zava-dehibe indrindra amin'ny fampiharana Fanamboarana Fitaovana. Ny kalitaon'ny vokatra farany tsara indrindra dia manatsara ny fotoana ho an'ny tsena sy ny fahafaham-pon'ny mpampiasa farany, izay mahasoa ny rehetra. Ampitomboy ny fahaizanao mifehy ny fluid OEM amin'ny fitaovana sy adaptatera avy amin'ny Hainar Hydraulics. Ny vokatray dia vita amin'ny vy tsy misy pentina, izay matanjaka, madio ary miady amin'ny fahasimbana. Ahoana ny tombotsoan'ny OEM amin'ny Stainless Steel? Raha ny momba ny famokarana vokatra, OEMs matetika ...
Ny indostrian'ny solika sy ny entona no fototry ny fiaraha-monina maoderina. Ny vokatra ao aminy dia manome angovo ho an'ny mpamokatra herinaratra, manafana trano, ary manome solika ho an'ny fiara sy fiaramanidina hitondrana entana sy olona eran-tany. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitrandrahana, fanadiovana ary fitaterana ireo ranon-javatra sy entona ireo dia tsy maintsy mijoro amin'ny tontolo miasa mafy. Tontolo iainana sarotra, fitaovana kalitao Ny indostrian'ny solika sy ny entona dia mampiasa fitaovana manokana maromaro mba hidirana amin'ny harena voajanahary sy hitondrana azy ireo eny an-tsena. Manomboka amin'ny fitrandrahana ambony mankany amin'ny fizarana afovoany sy ny fanadiovana midina, maro ny asa mitaky ny fitahirizana sy ny...
Ny tombon-dahiny amin'ny fanodinana simika Satria miasa isan'andro ny trano famokarana simika, dia mifandray tsy tapaka amin'ny akora mando, caustic, abrasive ary asidra ny tampon'ny fitaovana. Ho an'ny dingana manokana dia tsy maintsy mahazaka hafanana mafana na mangatsiaka be izy ireo ary mora diovina. Ny fametahana fantsona vy tsy misy vy ho an'ny fampiharana indostrialy simika dia manome tombony maro. Mafy, mahatohitra harafesina ary madio io fianakaviana io. Miovaova arakaraka ny naoty ny toetran'ny fampandehanana marina, fa ny toetra mahazatra dia ahitana: • Fisehoan'ny estetika • Tsy harafesina • Durab...